Fonera Tsigiro 86 + 18008724076
Tsigiro yeemail design2020@vip.163.com
Dhizaini Dhirowa Dhizaini
Simbi Sisitimu Sisitimu
Maindasitiri ekugadzira chirimwa chikamu
Kamudzira chimiro kirasi
Net Furemu, Heterosexual Structure Kirasi
Kuvaka hurongwa hwemvura nemagetsi
Simbi Yakagadzika Kirasi
Chirongwa chekuvaka chirongwa
Rutivi Rwekugadzira Chiitiko cheFekitori
Kusarudzwa kwakasarudzika kwemidziyo: Unyanzvi hunhu uye hunyanzvi pamativi ese maviri panguva imwe chete, nekudaro ichiwedzera zvakanyanya hunyanzvi hwekushongedza. Nekuda kweyeyero yakaenzana, iyo webhu ndiro haina kumbokanganisa mushure mekutenderera. 2. Iyo yakatwasuka michina H-danda flange yakatwasanuka muchina unotyisa ...
Kambani chigadzirwa chikumbiro
Company product application Zvimiro zvesimbi mamiriro: 1. Yakakwira simba simba uye huremu huremu Simbi ine yakasimba simba uye yakasununguka modulus. Inofananidzwa nekongiri nehuni, iyo reshiyo yehuwandu hwekupa simba ine yakaderera, saka pasi peimwechete mamiriro ekumanikidzwa, iyo nhengo chikamu chesimbi simbi idiki, huremu hwakafa hwakareruka, kutakurwa nekumisikidzwa zviri nyore, uye nesimbi mamiriro inokodzera zvivakwa zvine hukuru hwakakura, kureba uye huremu loa ...
Nhanganyaya Kusimbisa hutungamiri nekutonga kwedhipatimendi rinokwanisa rekuronga kwemadhorobha nekumaruwa pakushandiswa kwenzvimbo yehurumende nemabasa akasiyana ekuvaka inobatsira kusimudzira mashandisirwo eminda uye akasiyana mapurojekiti ekuvaka kuti aenderane nezvinangwa zvebudiriro nezvinodiwa zvakakosha zvakatarwa chirongwa ichi, zvichizopa vimbiso yekuzadzikiswa kwemaguta nekumaruwa kuronga kwese, kurongeka kwepfungwa, kuchengetedza ivhu, kusimudzira uye kusimudzira kusimudzira Plannin ...
Nhanganyaya Kusanganisira kuvakwa kwemvura (kuvaka mvura uye dhizaini yekuvaka dhizaini) uye kuvaka magetsi (kuvaka dhizaini yekuvaka magetsi), pamwe chete kunzi kudhirowa kwemvura nemagetsi. Kuvaka kupa kwemvura uye kudhirowa kwekuvaka dhizaini ndechimwe chezvinhu zveimwe purojekiti mune yeinjiniya chirongwa. Iyo ndiyo hwaro hukuru hwekumisikidza iyo purojekiti mutengo uye kuronga kuvaka, uye zvakare yakakosha ...
Nhanganyaya Zvidimbu zvekutanga izvo zvinoumba gridhi mativi ekoni, mativi mativi matatu, cube, truncated quadrangle, nezvimwe. Izvi zvikamu zvakakosha zvinogona kusanganiswa kuita matrons, quadrilateral, hexagoni, denderedzwa kana chero chimwe chimiro muchimiro cheplanar. Iine zvakanakira nzvimbo yekunetseka, kurema kurema, kuomarara kukuru, kuita kwakanaka kwekusimudzira, nezvimwewo. Inogona kushandiswa sedenga rejimunasiamu, cinema, imba yekuratidzira, imba yekumirira, nhandare yakamira awning, hangar, mbiri-nzira hombe yekoramu gridhi. chimiro uye ...
Nhanganyaya Chimiro chemumbure musanganiswa wemapurani uye chimiro. Iyo yakatetepa yakarongeka mhando inoshandisa yakakwira-simba inoshanduka membrane zvigadzirwa uye zvebetsero zvivakwa kuunza imwe yekufungidzira yekufungidzira mukati mavo neimwe nzira uye inoumba imwe nzvimbo yenzvimbo pasi pekushushikana kwekudzora, iyo inoshandiswa seyakavharidzira chimiro kana kuvaka main body uye ine kuomarara kwakakwana kuramba mutoro wekunze. Chimiro cheMembrane chinotyora maitiro echakachena yakatwasuka-mutsara dhizaini ...
Nhanganyaya Simbi simbi furemu chimiro chakanyanya kugadzirwa nesimbi uye ndeimwe yemhando huru dzekuvaka zvivakwa. Chimiro chine simba rakakwirira, kurema kurema uye kukwirira kuomarara, saka inonyanya kukodzera kuvaka hombe-span, Ultra-yakakwira uye Ultra-inorema zvivakwa. Izvo zvinhu zvine homogeneity yakanaka uye isotropy, ndeyomuviri wakasimba, uye inowirirana zvakanyanya nekufungidzira kwekutanga kweinjiniya makanika. Mashoko acho ane mapurasitiki akanaka uye kuomarara, anogona ...
Nhanganyaya Chidimbu chemaindasitiri chinoreva marudzi ese edzimba anoshandiswa zvakananga kugadzira kana kutsigira kugadzirwa, kusanganisira makuru mashopu, dzimba dzekubatsira uye zvivakwa zvekubatsira. Zvese zvirimwa mumaindasitiri, zvekufambisa, zvekutengesa, zvekuvaka, kwesainzi, zvikoro nezvimwe zvikamu zvinofanirwa kuverengerwa. Pamusoro pewekishopu inoshandiswa kugadzirwa, iyo indasitiri chirimwa inosanganisirawo zvivakwa zvayo. Maindasitiri emichero anogona kukamurwa mune imwechete-storey maindasitiri buil ...
China Zhenyuan Simbi Structure Injiniya CO., LTD inyanzvi simbi mamiriro kontrakta inosanganisa dhizaini, kugadzira uye kumisikidza.
Kero: Tianjin uye Yunnan, China
Runhare: 86 + 18008724076
Udza mashoko: Mr. Lin
Maawa ebhizinesi (Beijing nguva): 8:30 ~ 18:30